Sri Lanka : Ho Fahatsiarovana An’i Arthur C Clarke · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2018 2:23 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, हिन्दी, English
Nahakasika olona maro ny fahafatesan'i Arthur C. Clarke (1917 – 2008) – misy ireo tena mpankafy tantara foronina momba ny siansa (science fiction), ary ao koa ireo hafa izay nahafantatra azy fahavelony namoaka tanaty blaogy ny fahitàny ilay rangahy. Manomboka amin'ny fomba fijery tsotsotra ka hatramin'ny adihevitra hafahafa, tena tsaroan'ireo blaogera Sri Lanke i Clarke amin'ny fananany fijery lavitra sy fanofisana ny hoavy. Nifindra tao Sri Lanka ny taona 1956 io mpanoratra Britanika io ary nanorim-ponenana tao mihitsy.
Words of Amaruwan no nanoratra hoe ahoana no nipoiran'ny fitiavany tantara foronina momba ny siansa (science fiction), avy tamin'ny asa soratr'i Clarke .
Andriamatoa Arthur no antony nanombohako nitia “science fiction”. Tamin'ny faha 10 taonako aho no nandray ilay tantara fohy malaza be iray nosoratany: The Sentinel. Nanomboka teo aho dia lasa niankin-doha tanteraka. Ka dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy nahita ny asa sorany iray manontolo. Zavatra tsy mora ilay izy. Tena mpanoratra namokatra be tokoa Andriamatoa Arthur, efa nahatratra 100 mahery ny boky nosoratany fony fahavelony miampy andrana sy tantara fohy maro. Na ny Wikipedia aza tsy afaka mampiseho afatsy ny ampahany amin'ny tantaram-piainany. Ny tena mahaliana aminy, na dia avo lenta aza ny siansa tantarainy ao anatiny ny tantara foroniny dia tena tsotra ny fitantarany, mahafinaritra sy mafonja. Ary tena tantara no tantarainy fa tsy siansa fotsiny ihany.
Gallicissa nahatsiaro ny fihaonany tamin'ilay mpanoratra ny taona 2002.
Nikarakara io fihaonana io aho ary tena tsara vintana tokoa niaraka taminy tamin'io fitsidihana hihaonana tamin'i Dr Clarke io izay nahitàko azy nandinika ny saritanin'i Planeta Mars akaiky dia akaiky teo amin'ny solosain findainy ny andro nihaonanay taminy. Nasehony ny sarin'ireo Marsiana ary avy eo izy nanondro tsipika iray nanana loko niavaka teo amin'ilay izy, nanontany ny hevitray izy! Nibanjina maharitra ilay efijery teo izahay niezaka namoaka fehezanteny mazava, avy eo nahatsikaritra ny tarehinay velona ahishy, nanampy anay tamim-pitsikiana Andriamatoa Clarke ‘toy ny hoe nisy olona nitondra fiara somary lehibe ihany!’
Nisaona ny fahalasanan'ny namana iray akaiky sady niaraka niasa tamin'izy ireo ny LIRNEasia , nanamafy fa misy zavatra nihoatra lavitra noho ny fanoratana tantara foronina tao amin'io lehilahy io.
Ny volana Novambra 2005 ny LIRNEasia no nifanatrika ofisialy farany taminy rehefa nihaona tao Colombo ireo solontena vitsivitsy avy amin'ny WorldSpace (mpiara-miasa aminay amin'ilay tetikasa Last-Mile Hazinfo) izay nahitàna an'i Dr. Rangarajan. Mbola ampiasaina foana any anaty fampitambaovao avy amin'izay tetikasa izay ireo fanamarihana tsy tontan'ny ela nataony mikasika ny ilàna fampitandremana dieny mialoha momba ny loza mahatsiravina.
Rants, Raves ary Miscellaneous Musings samy nahatsiaro fihaonana fohy iray tamin'i Clarke – tantara fohy nahafinaritra momba ny niarahana nilalao tenisy ambony latabatra (TT) taminy. Nitondra lafi-pianana iray hafa an'ilay mpanoratra ihany koa ilay blaogera tamin'ny filazàny fa nisy niampanga azy ho mpanolan-jaza.
Tsy tena mpilalao tenisy ambony latabatra intsony aho izao. Mahakamo, ny antony nilalaovako tamin'izany dia ny hahafahako milaza amin'ny olona rehetra indray andro any izany fa, ieee, nilalao tenisy ambony latabatra niaraka tamin'i Arthur C Clarke aho. Fa nanala baraka be ilay izy. Anti-dahy 75 taona, manarina ny tenany amin'ny fitehenana amin'ny latabatra amin'ny tanany ilany, ary tsy mihetsiketsika eo amin'ny toerana misy azy eo akory no nandresy ahy. Mafonja be ny fipaikany, ary nijijy be koa ka nahatonga ahy niampanampana, izy anefa etsy ankilany tony tsara. Hoy ilay namako iray izay tamin'ny nitantarako izany : Tompony!
Ultrabrown avy ao India, nanoratra toy izao
Tsy midika akory izany rehetra izany fa tsy mahatsapa ireo zavatra bitika iainan'ny olombelona i Clarke, na koa ireo fihetsempontsika lalina : ilay asa sorany iray mampihetsi-po, mahafinaritra, “Dog Star”, miresaka momba ilay mpanamory sambondanitra iray sy ny alikany rehefa iny izy tsy maintsy hipetraka eny amin'ny toerana fandinihana teny amin'ny volana iny, no tantaram-pifandraisana akaiky sy fohy izay nahakotsa ny masoko.(Iray koa amin'ireo ohatra tsy fahita firy amin'ny asa soratr'i Clarke amin'ny saina mandanjalanja manatona akaiky ny sisintany manasaraka ny tsapa amin'ny tsy takatry ny saina, ary tsy manaiky tanteraka ny fanazavàna ara-tsiantifika.)
Ilay mpanoratra ny Moving Images, Moving People! izay niaraka niasa tamin'i Clarke nandritra ny 21 taona teo ho eo, nanoratra tamin'alahelo teo amin'ilay hafatra farany noraketina anaty lahatsary.
Efa nampanaovinay lobaka marevaka izy – ary nahatsapa aho sy ny ekipa iray manontolo fa io no fiakanjo mety indrindra ho an'ny hafatra iray izay tena manokana sy somary mampalahelo. Mampiavaka an'i Arthur C Clarke ny akanjo misy soritra lehibe noho ny karazan'akanjo mihaja hafa. Tamin'io fotoana io, izaho no talen'ny fandraketana sarimihetsika fa tsy mpitondra teniny ela nihetezana izay nahazo aina kokoa tamin'ny fomba fijeriny sy ny faniriany.
Nandalo fotoan-tsarotra vitsivitsy isika. Tamin'ny fahatapahana lalandrà tany amin'ny atidoha nanjo ny iray tamin'ireo mpanampy an'Andriamatoa Arthur. Maninona moa raha ampidirintsika ilay akanjon'ny NASA fanaovan'Ingahy Arthur matetika iny rehefa tsapany fa toa lasa mangatsika loatra ny fitaovana fitantanana rivotra?
[sary avy amin'ny Wikipedia]